USean Connery. Unaphakade James Bond kunye nabanye abalinganiswa boncwadi | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Izaziso, Inoveli
Sean Connery usweleke ku-Okthobha 31 ophelileyo 90 iminyaka. Lo mdlali waseScotland, Enye yeempawu eziphambili ze-cinema wangoku kunye nowamazwe aphesheya, wayenomsebenzi okoko nje wawubalasele kwaye ephawulwe ngamagama asele eyinxalenye yememori yesinema. Iqela le abalinganiswa abaguquleli babe uncwadi, njengoyena wamzisela udumo: ujames Bond. Ke oku kuhlaziywa kwabo kufanelekile njengerhafu.
1 ujames Bond
2 UDaniel Dravot-Indoda enokulawula
3 IGreen Knight -Ikrele leBrave: Igosa likaSir Gawain kunye noGreen Knight
4 UWilliam waseBaskerville-Igama likaRose
5 UMarko Ramius-Ukuzingela ngo-Okthobha oBomvu
6 UKumkani Arthur - I Knight yokuqala
7 UAlan Quatermain -Umanyano lwaMaNene aMangalisayo
UConnery wayengowokuqala ukuzisa uJames Bond ebomini, uphawu lokungafi olwenziwe ngu-Ian Fleming. Uthathelwa ingqalelo ngabaninzi njengowona mlingisi ubalaseleyo wearhente eyimfihlo ye-iconic enelayisensi yokubulala. Kum ngokuqinisekileyo kunjalo. Kodwa wayene thanda ubudlelwane benzondo neBond emva kweemovie ezisixhenxe zingena kulusu lwakhe.
007 ngokuchasene noGqr (1962)
Ukusuka eRashiya ngothando (1963)
UJames Bond vs. Goldfinger (1964)
Ukusebenza kweNdudumo (1965)
Siphila kabini kuphela (1967)
Iidayimani ngonaphakade (1971).
Sukuthi ngekhe (1983)
UDaniel Dravot - Indoda enokulawula
Ngokusekwe kwi- inoveli emfutshane eponymous from 1888, ebhalwe ngu URudyard Kipling, ithathwa njengeyona nto ibalaseleyo inayo. Ibalisa ibali leesibiniAmagosa aseBritane eIndiya ababa ngookumkani baseKafiristan, indawo ekude yase-Afghanistan. Kwakukhuthazwe bubomi babalinganiswa bobabini belo xesha.
UJohn huston ikhokele uguqulelo lwe-cinema kwi 1975. Ibibonisa iConnery kunye UMichael Caine, abathi ukusukela ngoko baba ngabahlobo abasenyongweni, ukuba badlale abalinganiswa abaphambili kwenye yeefilimu ze-adventure ngokugqwesa.
IGreen Knight - Ikrele leBrave: Igosa likaSir Gawain kunye neGreen Knight
Apha weza nesihloko se- IGreen Knight. Yayenye yeendlela ezininzi ezenziweyo ezenziwe kwifayile ye- Umbongo owaziwayo wesingesi wamaxesha aphakathi yesiko lama-Arthurian. Yeluswa nguwe Stephen Weeks ngo-1984, Benza inkwenkwezi kuyo Miles O'Keeffe njenge sir gawain kunye Sean Connery njengeGreen Knight.
UWilliam waseBaskerville - Igama le rose
Ngaba kunokwenzeka oyena mntu waziwayo kunye noqhwatyelwayo izandla kuncwadi, mhlawumbi ngenxa yokuba olu tshintsho kwi 1986 Ukusuka kumlawuli waseFrance UJean-Jacques Annaud yale klasi ye Umberto Echo yenye yeemovie ezaziwa kakhulu ngalo lonke ixesha. Akukho mntu unokucinga ngeyona nto ingumcuphi waseFranciscan kweli bali lolwaphulo-mthetho kunye nokufiphala kwangaphambi kwexesha nobunye ubuso.
UMarko Ramius - Ukuzingelwa ngo-Okthobha oBomvu
Ukulungelelanisa enye yeenoveli Tom Clancy, Efaka umhlalutyi wakhe odumileyo weCIA uJack Ryan, UJohn McTiernan ikhokelwe 1990 enye yezo ntshukumo kunye noxinzelelo kwiimovie ekucingelwa ukuba Uhlobo lwesibini (Umphathi waseRussia uMarko Ramius) isigubungele ngokupheleleyo ukuya kumlinganiswa ophambili kunye neqhawe (uJack Ryan). I-charisma yeConnery ihlambulule i-Alec Baldwin.
UKumkani Arthur - I-knight yokuqala
I-Connery yayisele ikho kuloo nto yokugqibela URobin Hood, inkosana yamasela (1991), nangona yayingagunyaziswanga. Kanye nje kwiminyaka eyadlulayo yayingu Twilight irobin hood ecaleni Audrey Hepburn en URobin kunye nemarian, apho uRichard Lester wayalela khona 1976.
Wabuyisa uKing Arthur, sele uthanda protagonista, kolu hlobo lwasimahla kunye nevidiyo yomculo ayikhokeleyo UJerry Zucker en 1995 nge URichard Gere njengomqambi uLanzarote, uJulia Ormond okanye uBen Cross.
UAlan Quatermain - UManyano lwaMaNene aMangalisayo
Kwakunjalo Imuvi yokugqibela apho uConnery wayenenkwenkwezi ngaphambi kokuthatha umhlala-phantsi kwi-cinema. Uyalathise UStephen Norrington, ethathe ireferensi kuthotho lwe amahlaya kumnandi UAlan Moore.
UConnery wadlala indawo eyaziwayo UAlan Quatermain, apho urhulumente wamaNgesi ahlala khona, kumaxesha eVictorian, ongaziyo ukuba angajongana njani ne Isicwangciso sedemon onjongo ikukulawula umhlaba. Ke bathatha isigqibo sokuqesha a iqela lamaqhawe kunye nabadlali Zonke iimeko ezifana nogqirha UHenry jekyll, Kaputeni Nemo, iVampire mina IHarker o UDorian Grey.
Ndihleli kwi ipasticheKodwa uConnery wazibonakalisa okokugqibela ukuba kutheni apho akhoyo, njengendoda ekhokelayo okanye umdlali weqonga oxhasayo, isiqinisekiso sempumelelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Izaziso » USean Connery. Unaphakade James Bond kunye nabanye abalinganiswa boncwadi